असफल हुँदैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार – Chitwan Post
राजनीति उकुसमुकुसको अवस्थाबाट गुज्रन थालेको छ । धरातलमा अनिष्टका सूचकहरु देखा पर्न थालेका छन् । मुख्य नेताहरुले नै विभिन्न शक्तिहरु संगठित भएर प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्न थालेको सार्वजनिक गरेका छन् । नेताहरुले खतरा कहाँबाट र किन आइलाग्दैछ त्यसको खुलासा भने गरेका छैनन् । सरकारको अकर्मण्यताले निम्तिले अर्को अनिष्टले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ नभएर अर्को विनासकारी अवस्था उन्मुख तुल्याउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यको यक्षप्रश्न भनेको हामीले के चाहेका हौँ ? भन्ने हो । किनकि, गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसका शासकहरु हाम्रै रोजाइअनुरुपका छन् । संसद्बाट उठान भएको विषयलाई संसद्ले नै टुङ्ग्याउन सकेको भए आज सरकारलाई काम गर्न असहज हुने थिएन । ठूलो शक्तिशाली सरकार छ, तर सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले नागरिकको भाव बुझ्नुपर्छ । बेरोजगारीले आक्रान्त युवापुस्ताको पेट समाजवादको पुरानो नाराले भरिँदैन । नेताहरुका उपदेश सुनेर नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नागरिकलाई संकट परेको बेला सहयोगका लागि राज्य छ भन्ने सोच पैदा गर्न सकिएन भने अनेकौँ अनर्थ जन्मिन सक्छन् ।
दुई तिहाई शक्तिशाली सरकारले पनि केही गर्न सकेन भने मुलुक फेरि कुनै न कुनै आन्दोलनतिर धकेलिन सक्छ । गणतन्त्रमा दुई तिहाई शक्तिको सरकार बनाउन पाउनु अद्भुत कुरा हो । यो सधैँ सबैलाई प्राप्त हुने अवसर होइन । यस्तो सरकार चलाउन पाएको बेला त नागरिकको उन्नतिको स्तर कहाँबाट कहाँ पु¥याउन सक्नुपर्ने हो, राष्ट्रलाई धेरै उचाइमा लान सक्नुपर्ने हो । विकासको गति, शान्ति, सुशासन दिनदिनै झन्झन् राम्रो हुँदै गएको अनुभव नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेर्नुमात्रै नागरिकको मौलिक अधिकार हो जस्तो देखिन्छ । हाम्रो देश भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डले विश्वमा उदाहरणीय बन्दै गएको छ । सुनकाण्ड, वाइडवडी, अनियमितता, एनसेल, कर विवाद सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा चर्चित भइसके । यी त ठूलै काण्ड भएका कारण बाहिर आए, तर यीभन्दा कम रकमका काण्ड कति छन् कति मुलुकभरि ! चुरे विनास, नदीनाला दोहन, म्यानपावरको घोटालाजस्ता तल्लो तहका जनतालाई असर पर्ने अराजकता र भ्रष्टाचार त कति छन् कति मुलुकभरि । आज जहाँ हे¥यो त्यहीँ भ्रष्टाचार भेटिन्छ । यस्तो स्थितिमा कसले कसलाई औँल्याएर दण्ड दिने ? भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्ने हिम्मत कुन नेताले गर्न सक्छ आज ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुभन्दा आफैँले संरक्षण गरेको विकृति÷विसंगति अन्त्य गर्न ठोस कदम बेलैमा चाल्न सक्नुपर्ने हो । जनताको तन्त्र पटकपटक खोसिएको छ । यस्तो दुर्भाग्य फेरि नहोस् भन्नलाई दलहरु सतर्क हुन जरूरी छ ।
अनुमान गरिएजस्तो वर्तमान नेकपा सरकार सशक्त तथा सबल हुनुको साटो दिन प्रतिदिन अर्कोले औँला ठड्याउँदा लाचार भएर बस्न विवश छ । सरकारको कार्यसम्पादनबाट दुई तथ्यहरु देखा पर्छन् । प्रथम, सरकारले देश सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गरेको थिएन । दोस्रो, सरकारले अझै आफ्नो गन्तव्यको मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन । सुखी नेपाली तथा समृद्ध नेपालको लोभलाग्दो नारा दिने सरकारले जनसाधारणको त परै जाओस्, आफ्नै दलका सदस्यहरुलाई समेत उक्त उद्देश्य प्राप्तिको मार्गतर्फ अग्रसर भएको छनकसम्म पनि दिन सकिराखेको छैन ।
अहिले एकपछि अर्को गरेर प्रस्तावित विधेयकहरु विवादग्रस्त छन् । भूमिसुधार विधेयक पुँजीपतिको हितमा ल्याइएको छ । कम्युनिस्ट शब्दलाई नै दूषित गर्ने गरी सरकारद्वारा जिम्मेवारी वहन गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति कायम छ । सरकारले सामूहिकरुपमा गरेका निर्णय तथा उसले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता आजको भोलि नै परिवर्तन हुने गर्छन् ।
मुलुकमा रोजगारीको संकट छ । रोजगारीका लागि व्यक्तिगत तवरमा गरिएका प्रयत्नमा राज्यको सहयोग ठीक ढंगले हुन सकेको छैन, जसले ठूला कामबाट ठूलै लाभ लिइरहेका छन् । ५० लाखभन्दा बढी नागरिक एकपटक स्वदेश फर्किए भने यो मुलुकको हविगत के होला ? विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्सले धानेको मुलुकमा ३ अर्ब रूपैयाँ बेरोजारलाई रोजगारीका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । सरकार न द्रुतगतिले विकास निर्माणको काम गर्न सकिरहेको छ, न त समृद्धिका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न । सत्तासीनहरुको स्वार्थ, लोभ, अहं, अकर्मण्यता, अक्षमता, अनुभवहीनता र सत्तारुढ दलको अन्तरकलह एवं एकतामा जटिलताका कारण सरकारले जनअपेक्षा र आफ्नै घोषणापत्रअनुसार जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो एकछेउ पनि गर्न सकेको छैन । सरकारको कामबाट आमजनता निराश र असन्तुष्ट छन् । जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षामा धमिरा लाग्दै गएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा नराम्रो रोग सल्किँदै जान लागेको छ । जति ठूलो कुर्सीमा बस्यो त्यति ठूलो व्यक्तित्वको विकास हुन्छ आफूमा भन्ने मनोरोग । सरकारी वा राजनीतिक दलका ठूला पदमा आसीन व्यक्तिहरुलाई यसले गाँजेको छ । यो गणतान्त्रिक संस्कार हो ? समाजवाद उन्मुख लक्ष्यमा पुग्ने खुड्किलो हो यो ? यस्तो चलन अन्य पुँजीवादी पार्टीहरुमा भए पनि नेकपामा हुनु नपर्ने हो । नेकपामा त सबै तहका नेताहरुको आसन समान तह र स्तरको हुनुपर्ने हो ।
मञ्च बनाउने, सजाउने, मञ्चमा आसीन गराउने, व्याच र खादा पहिराउने, गलाभरि माला लगाउनेजस्ता समय बर्बाद गराउने विधि समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको परिचायक हो ? अझ, कतिपय समारोहमा त आसन ग्रहण गराउने काम किस्ता–किस्तामा गराइन्छ । प्रमदेखि मन्त्री र उच्च तहका नेताहरुमा एउटा मनोरोग झाँगिएको छ । उहाँहरुमा सादा जीवन उच्च विचार जो पूर्वीय दर्शनको जीवन्त आदर्श हो, त्यो दर्शनबाट हाम्रो नेतृत्व आज बाहिरिएको छ ।
अर्को कुरा, दक्षिणतिरबाट तातो हावा चलेको बेला सरकार झनै चनाखो हुनुपर्ने हो । पश्चिमतिर बादल गर्जिरहेको बेला सरकार झनै सन्तुलित र संयमित बन्नुपर्ने हो, तर यो सरकारमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत सही विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य देखिएन ।